New Year’s Message – Mandalay International Science Academy
No.118 (A,B,D), Block 51 4/3, 58th St (Bet 27th & 28th St), Kan Kauk Qtr, Chan Qye Thar Zan Tsp.
Ph:(02) 4072753, (09) 43060423, (09) 43060027
January 11, 2021 Wai Yan
We wish you allahappy new year and hope that you haveafantastic twelve months ahead.
From MISA’s perspective, there arealot of reasons for optimism for 2021. Survey results show that students are satisfied with the online learning format and are progressing academically along the Cambridge pathway. Teachers are on track with their curricula, and are now very adept at teaching online withawide variety of tools. Nonetheless, we hope to be able to switch back to face-to-face teaching in the new academic year and believe that this will be possible in the not-too-distant future as more and more vaccines become available, both in the private sector and commercially.
Our plans to expand the school are also moving ahead. Already, the full Cambridge pathway, from KG to A Levels, is available at MISA. Once the new campus is ready, all secondary students will move there, meaning they can benefit from excellent new facilities, while our primary students can enjoy more space and increased access to facilities here on 58th street.
As mentioned in an earlier message, formal evaluation is not practicable online, for which reason our teachers have used frequent formative assessments to arrive atafair overall picture of each student’s performance. You will be able to discuss your child’s progress with teachers in our Parent Teacher Conference which begins on February 1st. All families will be called and notified of the schedule.
As always, we welcome your feedback, and would be grateful if you could fill out the parent survey, in the interests of improving the service we provide to our learners.
As mentioned, we have already collected survey results from students and teachers, and we are happy to say that the feedback has been overwhelmingly positive. Students are now very familiar with the online format, are enjoying the activities that teachers give them, and most importantly, are progressing academically.
Please note that January 13 isapublic holiday, due to Kayin New Year, so there won’t be classes on that day.
Here’s to another fruitful year, andareturn to normality for everyone!
ပျော်ရွှင်စရာ ဆယ့်နှစ်လကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုပါသည်။
MISA၏ အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနစ်သည် ကောင်းခြင်းများစွာ ရနိုင်မည့်နှစ်အဖြစ် အပြုသဘော ရှုမြင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဖြေကြားထားကြတဲ့ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ ကျောင်းသားများသည် online မှတဆင့် သင်ယူမှုပုံစံကို ကျေနပ်အားရပြီး Cambridge Pathwayအတိုင်း လေ့လာသင်ယူကြရင်းဖြင့် တိုးတက်မှုများရှိလာသည်ဟု ခံယူထားကြကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။ ဆရာ ဆရာမများသည်လည်း သတ်မှတ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတိုင်း ပြည့်မှစွာ သင်ကြားလျက်ရှိပြီး online တွင်အသုံးပြုနိုင်မည့် သင်ထောက်ကူမျိုးစုံကို ကောင်းစွာ အသုံးပြု သင်ကြားရင်း online သင်ကြားရေးနှင့် ကောင်းစွာ နေသားတကျ ရှိနေပါပြီ။ မကြာတော့မည့် အနာဂတ်တွင် အစိုးရစီမံကိန်းများအရရော ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်နှင့်ပါ ကာကွယ်ဆေးများရရှိပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပုံမှန် အတန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျောင်းတိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်များကိုလည်း ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ KG မှသည် A Level အထိ Cambridge pathway အပြည့်အဝ အဖြစ် MISA ကျောင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပရဝုဏ်အသစ် အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် အလယ်တန်းကျောင်းသားများအားလုံးပြောင်းရွှေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော facilities များဖြင့် ပညာသင်ယူခွင့်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၅၈လမ်းကျောင်းတွင် မူလတန်းကျောင်းသားများအတွက် နေရာလွတ်များ ပိုမိုရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း online တွင် စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲများကဲ့သို့ စစ်ဆေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဆရာ၊ဆရာမများသည် ကျောင်းသားတစ်ဦး ချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ မျှတမှုရှိစေရန် အတန်းချိန်အတွင်း မကြာခဏ စစ်ဆေးနိုင်သည့် Formative Assessment နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုစစ်ဆေးပါသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်မည့် မိဘဆရာအစည်းအဝေးတွင် သင့်ကလေး၏ တိုးတက်မှုကို ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်‌ ဆွေးနွေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုအားလုံးကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အချိန်ဇယားနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိဘများ၏ feedbackကို အမြဲကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ သင်ကြားမှုတွင် တိုးတက်မှုရှိစေရန်တွက် မိဘများအနေဖြင့် parent survey ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများထံမှ စစ်တမ်းရလဒ်များကို စုဆောင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် online မှ သင်ယူမှုနှင့် အလွန်အကျွမ်းတဝင်ရှိနေပြီး ဆရာ၊ဆရာမများပေးသော သင်ယူနည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ပျော်မွေ့နေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ သူတို့၏ ပညာရေးတိုးတက်လျက်ရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့သည် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်သောကြောင့် စိုးရသတ်မှတ်သောရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုနေ့တွင်စာသင်အတန်းများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အခြေအနေ အတိုင်းပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေ။
Weekend Course Message
Parent Message December 16
Feb 1 Message
By Wai Yan / No Comments
(09) 430 604 23
(09) 430 600 27
©2022 MISA · Mandalay International Science Academy